Joan Margarit anokunda iyo Cervantes Prize. 4 nhetembo | Zvazvino Zvinyorwa
Joan Margarit anokunda iyo Cervantes Prize. 4 nhetembo
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Makwikwi neMubairo, Vanyori, Noticias, Nhetembo
Mifananidzo: Joan Margarit webhusaiti.
Joan Margarit ndichangobva kuhwina iyo Cervantes Mubairo 2019. Mubairo wakakosha kwazvo wekunyora mumutauro wechiSpanish, wakapihwa 125.000 euros, waenda kune izvi Mutongi wechiCatalan uyo akasimudzira basa rake mumitauro miviri, semutakuri akajairika wemubatanidzwa wemagariro kupfuura chero pfungwa. Izvi ndizvo 4 yenhetembo dzake kuti umuzive, iverenge kana kuiwanazve.
2 4 nhetembo
2.1 China mangwanani
2.2 Tsamba yacho
2.4 Mwenje yemagetsi usiku
Joan Margarit ini Consarnau akaberekerwa mu Sanahuja, Lleida, musi waMay 11, 1938. Ndiwo nyanduri, mapurani uye purofesa atoenda pamudyandigere kubva kuPolytechnic University yeBarcelona. Semunyori akatanga kutsikisa muchiSpanish kumashure muma60's ne Nziyo dzechoir yemurume ega. Uye haana kuzviita zvakare kusvika makore gumi gare gare na Chronicle. Makore mashoma gare gare akatanga kuburitsa muchiCatalan. Ndiye here iye muturikiri webasa rake muchiSpanish, kunyangwe iye achinyorawo zvisina kujeka mune imwe kana imwe. Gore rapfuura akaburitsa memoir yake: Kuti uwane imba unofanirwa kuhwina muhondo.
En 2008 Joan Margarit aive National Nhetembo Mubairo uyewo Mubairo weNyika weZvinyorwa zveGeneralitat yeCatalonia. Uye in 2013 akahwina zvakare mubairo Vananyanduri veLatin World Víctor Sandoval, anobva kuMexico. Iyi Cervantes Award korona yake yebasa, iri zvakare iri ye mumwe wevanyori vadetembwa vanonyanya kuverenga muchiSpanish.
Anthology yekuverenga ndeye iyo Yese nhetembo (1975-2015). Ndasarudza aya mana.
Imbwa yekutanga inochema, uye ipapo ipapo
pane maungira muchivanze, mamwe anotinhira
panguva imwechete mune rimwe bark,
nehasha uye pasina mutinhimira.
Dzinohukura, mhodzi dzadzo dzinosvika mudenga.
Unobva kupi, imbwa? Chii mangwana
anomutsa kuhukura kweusiku?
Ini ndinonzwa matauriro aunoita pakurota kwemwanasikana wangu
kubva panhovo, yakakomberedzwa netsvina
iyo yaunomaka nayo ndima
yenzira, patio, nzvimbo dzakashama.
Sezvo ndanga ndichiita
nenhetembo dzangu, kubva kwandinochema
uye ndinotara nzvimbo yerufu.
Waigara uchitarisa kumberi
sokunge gungwa rakanga riripo. Makasika
nenzira iyi kufamba kwemafungu
mutorwa uye ngano pane rimwe gungwa.
Isu takabatanidzwa nesimba rine njodzi
izvo zvinopa rudo kusurukirwa.
Ichiri kuita kuti minwe yangu idedere,
zvisingaite iyi bepa.
Nzira yakasiyiwa pakati pako neni,
yakafukidzwa netsamba, mashizha akafa.
Asi ndinoziva nzira yacho inoramba iripo.
Kana ndikaisa ruoko rwangu pachisote chidiki,
Ndiri kuinzwa ichizorora kumusana kwako.
sokunge gungwa rakanga riripo, ratoshandurwa
nezwi rakaneta, rakashoshoma uye richidziya.
Zvishoma zvinotibatanidza izvozvi: chete kudedera
bepa iri rakanaka pakati peminwe.
Iwe urikushaya zvinhu zvakawanda.
Saka mazuva anozadza
nguva dzakagadzirwa dzekumirira maoko ako,
kupotsa maoko ako madiki,
kuti vakatora yangu kakawanda.
Tinofanira kujairira kusavapo kwako.
Zhizha rakatopfuura pasina maziso ako
uye gungwa richazofanira kujairawo.
Mugwagwa wako, uchiri kwenguva refu,
kumirira, pamberi pesuo rako,
nokushivirira, nhanho dzako.
hapana anoziva kumirira semugwagwa.
Uye izvi zvinondizadza
kuti unondibata uye kuti unonditarisa,
iwe undiudze zvekuita nehupenyu hwangu,
Sezvo mazuva anopfuura, nemvura kana denga rebhuruu,
Mwenje yemagetsi usiku
Ndinoedza kukunyengerera munguva yakapfuura.
Maoko pavhiri uye nechiedza ichi
kubva kuhusiku kirabhu yedashboard
-nguva yechando kufungidzira- kutamba newe.
Shure kwangu ndakangofanana nerori hombe
mangwana anoita kuputika kwemwenje.
Hapana munhu anotyaira uye anondibata,
asi ikozvino iwe neni tinofamba pamwe chete
uye mota inogona kuva mabhiza maviri
kubva pamakumi matanhatu kusvika kuParis.
"Je ne sorryte rien" anoimba Edith Piaf.
Pasi pehwindo, husiku hunopinda
kutonhora kubva munzira yakasununguka, uye zvakapfuura
anoswedera akananga, nekukurumidza:
ndiyambuke undipofumadze usaderedze mwenje.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Joan Margarit anokunda iyo Cervantes Prize. 4 nhetembo
Grupo Planeta inovhara iyo Denderedzwa yeVaverengi
Robert Louis Stevenson anozvarwa. 4 nhetembo dzakasarudzwa